ko htike's prosaic collection: သစ္စာ အဓိဌာန်
The last days of Than Shwe. Will they be worse than those of Hitler?
17 May 2009 at 06:05
17 May 2009 at 06:30
ဒီမှတ်ချက်ကို ကျွန်မ အပေါ်က ပို့စ်မှာ မှားပြီးထည့်မိလို့ ပြန်ကူးလာပြီးဒီပို့စ်မှာ ပြန်လာထည့်တာ ဖြစ်တယ်။
Nge Naing ဆိုတဲ့မိန်းမရယ်..
ကျွန်မ ပြောတဲ့ထဲမှာ ဆရာကြီးလေသံ တခွန်းမှမပါပါဘူး။ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးအတွက် ကောင်းစေချင်တာကို စေတနာနဲ့ မှတ်ချက်ပေးတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ စာဖတ်သူတယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးပါ။ ကျွန်မပြောတဲ့အချက်ကို ဘလော့ဂါ ကိုထိုက်ကိုယ်တိုင်က ကန့်ကွက်ပြီး လက်မခံရင် သူကျွန်မကို ပြန်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။ ရှင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ရင်တော့ လောကီရေးရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘုရားဘာပြောခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလည်း သိမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်မ မှတ်ချက်ကို ဆရာကြီးလုပ်တယ်ထင်ပြီး နားလည်မှုလွဲသွားလို့ ရှင်စိတ်အနှောင့်အယှက် ဒါမှမဟုတ် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်သွားတာကိုတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက ရှင်ထင်သလို ဆရာကြီးလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။